नेपालमा पानी होइन, डलर बगिरहेको छ | Citizen Post News
प्रो.रमजान अली मियां अध्यक्ष, नेपाल–कतार मैत्री समाज
कतारमा बस्दै आएका रमजान ०६४ सालदेखि आप्रबासीहरुको हकअधिकार संरक्षण गर्न तल्लिन छन् । कतार र नेपालबीच भएको मानवअधिकार सम्झौताले नेपाली श्रमिक र समुदायलाई मार्ग कोरिएको प्रो. रमजानको धारणा छ । रमजानले ‘आधुनिक अरवी भाषा प्रशिक्षक’ नामक पुस्तक पनि लेखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली श्रमिक संगठन दोहाका अध्यक्ष तथा गैरआवसिय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारका लागि कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका प्रो.रमजानसँग सिटिजनपोष्टका लागि आदित्य दाहालले गरेको कुराकानी:
यहाँ विगत लामो समयदेखि कतारमा बस्दै आउनु भएको छ, कतारमा बस्ने आप्रावासी नेपाली र श्रमिकका समस्या के–के देख्नु भएको छ ?
तपाईलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ कतारकै जम्मा जनसंख्या साँडे तीन लाख छ । कतारमा मात्र हामी नेपाली साँढे चार लाख छौ । यसको मतलब त्यहाँको स्थायी जनसंख्या भन्दा नेपाली बढि छन् । भारतीय समुदायपछि दोस्रो ठुलो समुदायका रुपमा हामी छौं । जो विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो सपना साकार पार्न गएका हौं । हाल यो संख्या बढ्दो छ । जहाा नेपालीहरुको संख्या बढ्दो छ, त्यहाा नेपालीहको समस्या पनि दैनिक थपिरहेको छ । चाहे त्यो देशको कारणले होस् या हामीभित्रका केही कमिकमजोरीका कारण । सानो परिवारको एउटै घरमा त समस्या हुन्छ कतारमा नेपालीका केही समस्या छैन् भन्न सकिन्न । विभिन्न देशमा मानवअधिकार संरक्षणको सम्र्वद्धन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार समिति हुने गर्दछ । जुन एउटा स्वतन्त्र संगठन हो । जसले कतारमा रहेका विभिन्न आप्रबासी र कतारी नागरिकहरुको समस्याहरु हेर्छ । नेपाली समुदायमा श्रमिकहरुको तलब समस्या, आफ्नो हकअधिकार उल्लङ्घन भएका समस्या वा हकअधिकार खोसिएको महशुस गर्छ भने राष्ट्रिय मानवअधिकार समितिले हेर्ने गरेको छ । यो संस्था नेपालीको लागि मात्र नभईकन समग्र आप्रबासी र कतारीबासिन्दाको लागि हो । तर हामीले पछिल्लो पटक ताजा र नयाा अध्यावधिक रुपमा नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र कतारको राष्ट्रिय मानवअधिकार समितिवीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौं । माननिय अनुपराज शर्मा र कतारी समकक्षी डा.अलिसमिक अल्मरले जुन सम्र्झौता गर्नु भएको हो । त्यसपछि हामीले तत्काल नेपाली श्रमिकहरुको हकअधिकारका लागि एउटा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेका थियौं । कतारी कानुनले त्यहाा कुनै संघसस्था र ट्रेड यूनियन खोल्न दिँदैन । कडा परिवन्द विच हामी सफल भएका छौ । त्यहाा हाम्रो कार्यालय छ, जहाा कुनैपनि नेपालीले कार्यालय आएर आफ्नो समस्याहरु राख्न सक्छ । त्यो समस्या राखेपछि त्यसलाई त्यहाँको कानुनी विभागले हेर्छ । त्यसपश्यात् सम्वन्धित निकाय, मन्त्रालय, विभागमा त्यो फाईल पठाइन्छ । यसरी नै समस्या परेका, पीडामा खेपेका र आफ्नो हकअधिकार खोसिएका व्यक्तिले आफ्नो अधिकार पाउने बातावरण बनाएका छौं ।
जुन प्राकृतिक सम्पदा, जल र जमिन हामीसँग छ, अहिले खेतीपाती समेत हुन छोडिसकेको छ । कतारले विश्वबाट पानी आयत गरिरहेको छ । तर हाम्रो हिमाल र नदीहरुका मुहानबाट निस्किएका पानी त्यत्तिकै बगिरहेका छन् । त्यो पानी बगेको होइन, डलर बगेको हो । कतारलाई पानी मात्र बेच्ने सम्झौता गर्न सकियो भने बार्षिक अर्वौको डलर आम्दानी हुन्छ । त्यो गर्न हामी चुकेका र्छौ । यो हाम्रै देशको कमजोरी हो ।
कतार एउटा यस्तो देश हो जहाँ ४ बर्षदेखि नेपाली राजदुतविहिन अवस्थामा छ । कतारमा नेपाली राजदुतविहिन हुनुले नै समस्या जटिल भएको हो । जुन घरमा अभिभावक हुँदैन, त्यो घरको अवस्था चिन्ताजनक हुनु स्वभाविक हो । कतार यतिवेला अभिभावकविहिन छ । त्यहा रहेका ४ लाख भन्दा बढि नेपाली अभिभावकविहिन छन् । समस्या सहि रुपमा नेपाली पक्षले उठान गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन् । जुन दिन यि समस्याको समाधान हुन्छ, त्यसपछि क्रमिक सुधार आउने छ ।
एनआरएनले त्यहााका पीडित नेपालीबाट पैसा उठाएर पनि सहयोग गर्दैन् भन्ने सुनिन्छ नि ?
मैले बुझेअनुसार त्यो गलत हो । त्यस ठाउमा एनआरएनले सम्बन्धित पैरवी भएको छ । जेलमा भएका नेपालीलाई हेर्न भ्रमण गराउनेदेखि विभिन्न कुरामा सहयोग गर्छ । जसरी विश्वको अन्य कुनामा एनआरएन काम गरिरहेको छ, त्यसैगरि खाँडी तथा कतारमा पनि अतुलनिय सहयोग पुर्‍याउदै आएको छ ।
कतार र नेपालवीच भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनको अवस्थामा छ भनिन्छ, किन ?
नेपाल र कतारबीच २००५ मा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले श्रम सम्झौता गर्नु भएको थियो । यसको बास्तविकता चाहिं के हो ?
त्यो सम्झौतापछि २००७ मा रमेश लेखकले हस्ताक्षर गर्नुभयो । दुई मुलुकबीच भएको सम्झौतामा प्रत्येक दुई बर्षमा एकपटक दोहा बस्ने र एकपटक नेपालमा बैठक बस्ने सहमति थियो । अहिले यो हुन सकिरहेको छैन् । केही कानुनी जटिलताहरु पनि छन् । कुनै श्रमिक दुई बर्षको लागि कतार आउँछ भने करार अवधिभित्रै कम्पनी वा रोजगारीमा सम्झौताविपरित देखिए त्यसको उसको जिम्मा रोजगार दिने कम्पनीले लिनुपर्ने हुन्छ, यो हुन सकेको छैन् । अन्य देशहरुमा श्रम सम्झौता नै कडा हुन्छ । त्यहा काम गर्न गएका श्रमिकले भने अनुसार काम र तलव नपाए उसले आफ्नो काम परिर्वतन गर्न पाउँछ वा क्षतिसहित आफ्नो मुलुक फर्कने अधिकार हुन्छ । हाम्रो माग पनि त्यही हो । कतारबाट रेमिट्यान्ससहित लाश आइरहेको छ । रेमिट्यान्स लिनु ठुलो कुरा होईन । कतारबाट लिन सक्ने धेरै कुराहरु छन् । जुन प्राकृतिक सम्पदा, जल र जमिन हामीसँग छ, अहिले खेतीपाती समेत हुन छोडिसकेको छ । कतारले विश्वबाट पानी आयत गरिरहेको छ । तर हाम्रो हिमाल र नदीहरुका मुहानबाट निस्किएका पानी त्यत्तिकै बगिरहेका छन् । त्यो पानी बगेको होइन, डलर बगेको हो । कतारलाई पानी मात्र बेच्ने सम्झौता गर्न सकियो भने बार्षिक अर्वौको डलर आम्दानी हुन्छ । त्यो गर्न हामी चुकेका र्छौ । यो हाम्रै देशको कमजोरी हो ।
नेपालले कतारलाई पानी बेच्ने कुरा संभव छ र ?
किन संभव नहुनु । पहिला त दुई मुलुकबीच व्यापार–सम्झौता हुनुपर्छ । जसरी नेपाली कतारको व्यापारिक क्षेत्र विकास गर्न लागिपरेका छन्, त्यसैगरी कतारको लगानी नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । पर्यटकीय हिसावले कतार भन्दा नेपाल उत्कृष्ट र नजिक छ । यहाा बगिरहेका नदी र खोलाका पानी कतारमा विक्री गर्न सकियो भने करोडौं डलर आम्दानी हुन्छ । हामीले कतारका लागि जहिले श्रम दिईरहेका छौं, अव लिने हाम्रो पालो हो । नेपाल सरकार यो कुरामा संवेदनशिल हुनुपर्छ, तब यो संभव छ ।